Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): Nsen
at 2/01/2013 10:04:00 AM
Khon Ja shared
Majan kasat ai hpe ra sharawng nna tsun ai gaw n re. Simsam lam hpe tengsha ra sharawng nngai. Tara Rap Ra ai Simsa Lam nan lu la ra ai. Majoi gap shazim ai hpe simsa lam, ngu n hkap la nngai.
Buga de garum shingtau ai, alu jaw ai, akyu hpyi ya ai, maigan kaw nna nsen shangoi ai kaw shanglawm ya ai shara shagu na Wunpawng Myu Sha yawng hpe grai chyeju dum nngai.
Ngam ai, Keyboard chye lang ai Jinghpaw ni..
Bugaamatu myit n pyaw ai, myit ru ai, grai hkrap kau sai, ya gara hku rai sata...blur blur blur... Sum tsan ga kaw nna...
Shawnglam de Myu Tsaw ni kade myi shakut shaja tim, Laknak n-gun n bung ai majaw ya na zawn byin ai re. Ganoi2ning daram galu sai majan hta tinangasak, hkum shan, nta masha ni hpe ap nawng ya mat wa sai ni kade myi law tim, anhte yawng tangdu hkra n shang lawm ai majaw rai nga ai. Buga kaw nga ai hpang lam na nta masha ni ap awng ai, ngu ai mung degree htum sai.
Ya ten hta ndai zawn byin ai gaw "NANG" tang du hkra n shang lawm ai majaw re. Ya duhkra buga de alu bang, nga jang, Nawku Jawng kaw sa bang ai daram sha sa bang, lam makau na mawhpyi hpe jaw ai daram sha bang dat dat re ai majaw rai nga ai. Bugaamatu ngu "Overtime" yu nna gumhpraw tam bang ya ai masha nga nni?
Shawng lam du nga ai Myu Tsaw share shagan ni lama wa, NaaKahpu, Kawa, Kanau, Kana majing rai yang, Naatsawra wa rai yang, nang nan aja awa bungli galaw, n lu n sha rai, n shakya rai nna lum palawng mung mari ya na rai nga ndai. machyu makawp palawng hte gupchyawp mung mari ya na rai nga nndai. Atsang awang kagat mai ai gyep din mung mari ya na rai nga ndai. Tsirung du yang mung atsawm sa gawan akyu hpyi ya na rai nga ndai. Hkala nba byin ai shani mung atsawm sha bai gawn lajang na rai nga ndai. Machyu makawp palawng langai kade ta... nga ai ga san hpe 3000 yuan ngu jang.. grai hpu ai.. very expensive.. nga ai ni... Tinangashare shagan ni hpe pyi manu n chye shadan, makawp maga n myit, asak hpe manu n chye shadan sayang gaw, du ai shara kaw adawt si mat nu.
စစ်ကြီးကို မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆိုပြီး စပြီး ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ အပစ်အခတ်ခိုင်းမှု၊ လက်နက်ချခိုင်းမှု၊ အားမတန်မာန်လျှော့အောင် လုပ်ပြီး ချောင်ပိတ်လည်ပင်းညှစ်မှုနဲ့ ကင်းဝေးတဲ့ တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုချင်တာပါ။ Justice Guarantee Lasting Peace. အတွေ့အကြုံများပြီလေ။
လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ လက်နက်အင်အားနဲ့ လူအင်အား မမျှတမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး မတရားမှုက ပိုများလာတာကို witness လုပ်နေရတယ်။ ယုတ်စွအဆုံး လက်နက်မရှိတဲ့ ၁၁ နှစ်သမီးကိုတောင် မုဒိန်းကျင့်ခဲ့ကြတယ်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသူများ၊ ကူညီပံ့ပိုးသူများအားလုံးကို လေးစားကြေးဇူးတင်ပါတယ်။ နေရာတကာမှာ ရောက်နေတဲ့ ပါဝင်လှူဒါန်း၊ ဆုတောင်း၊ အသံထွက်အောင် အော်တဲ့နေရာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ကချင်တွေကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘယ်မှာမှ မပါဝင်သေးတဲ့ နေရာအနှံ့အပြားက ကီးဘုတ်ကိုင်တတ်တဲ့ ကချင်တွေ၊ Online ပေါ်ကနေ၊ ဒီနေ့ဘာဖြစ်ပြီလဲ၊ ဟိုလိုလုပ်လိုက်ပါလား၊ ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလား၊ အ၇မ်းငိုလိုက်ရတယ်။ ဗလာ။...ဗလာ... ဗလာ....
ရှေ့တန်းက ကချင်တွေအားလုံး တာဝန်ကျေတယ်။ တိုက်သူတိုက်၊ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို စောင့်ရှောက်၊ တယောက်မှ မအားမလပ်၊
ဒီလိုဖြစ်နေတာ ရှင်တို့တတွေ အပြည့်အ၀ မပါဝင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်၊ အကယ်၍များ.. IDP တွေ ရှေ့တန်းက ရဲဘော်တွေ၊ နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေသာ ရှင်တို့ မိသားစုအရင်းခေါက်ခေါက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ရှင်တို့တတွေ မသောက်မစား၊ အလှမပြင်ဘဲ အလုပ်တွေ ကုန်းရုန်းလုပ်ပြီး ငွေရှာပြီး ပို့ကြမှာပါ၊ အစားအသောက်ဝအောင် ငွေပို့လိမ့်မယ်။ အနွေးထည်လည်း ၀ယ်ပေးလိမ့်မယ်၊ ကျည်ကာလည်း ၀ယ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဆေးရုံမှာလည်း သွားစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်။ ဒုက္ခိတဖြစ်ပြီးပြန်လာရင်တောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကြိုဆိုလိမ့်မယ်။
Online က တဖွဖွ မေးခွန်းတွေ မေးနေလို့... ၂ နှစ်နီးပါး ကြာလာတဲ့ စစ်မှာ အချင်းချင်းကူညီဖို့ပြောတဲ့အခါ အသံတိတ်သွားမယ် ဆိုရင်တော့... ရောက်ရာအရပ်မှာ ထုခွဲပြီး သေလိုက်။
Burmese army used Chemical Weapons against KIA
ဇန်န၀ါရီ ၁ရ ရက်နေ့ က ဗမာအစိုးရတပ်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတုလက်နက်ကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာကဲ့သို့မည်းခြောက်သွားပြီး အသားကိုပါလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ ကေအိုင်အေ တပ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်.....မီးလောင်ဗုံးကဲ့သို့ ပြင်းထန်ပြီး ဗုံးဆံထိသော နေရာများတွင် လောင်ကျွမ်းသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားသည်။ ပြင်းထန်သော ဓါတုလက်နက် သို့ မဟုတ် ပြင်းထန်သော မီးလောင်ဗုံးများ ကို ကေအိုင်အေ စစ်မျက်နှာပြင်တွင် ဗမာအစိုးရတပ်များ မှ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေကြောင်း ဤ ဒါဏ်ရာများက သက်သေခံနေပါတယ်။